दाङको समृद्धि चाहन्छौं गिरी « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
दाङको समृद्धि चाहन्छौं गिरी
२७ कार्तिक २०७४, सोमबार १४:३७ मा प्रकाशित
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रित सदस्य एवं दाङ क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधी सभा सदस्यका उम्मेदवार दीपक गिरीसंग आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
धन्यवाद तपाई, अनि तपाईको सैघाली खबरलाई पनि । मलाई आसन्न निर्वाचनका मुख्य एजेण्डाका विषयमा केही कुरा राख्न दिनुभएकोमा । मेरो उम्मेद्वारीका धेरै आधारहरु छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा हामी समग्र दाङको समृद्धि चाहन्छौं । समृद्धिका लागि विकास एउटा मुख्य आधार हो । विकासका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु तयार हुने क्रममा छन्, केही स्थानमा काम भइसकेका छन् भने केही स्थानमा पूर्वाधार निर्माणको तयारीमा छन् । खासमा हामीहरु दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने हाम्रो मिसन हो । त्यसैका लागि हामी कांग्रेसका सबै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारहरु सामूहिक चुनावी एजेण्डा बनाउने सवालमा केन्द्रित रहेका छौं । सम्भवतः केही दिनमै हामीले चुनावी एजेण्डाहरु सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं ।
३) प्रादेशिक राजधानीको कुरा गर्नुभो, धेरै पूर्वाधारहरु अझै डामाडोलका अवस्थामा छन् नि ? जस्तै हवाइ सेवाको निरन्तरता, नाका सडक नखुलेको अवस्था अनि दाङ—सुर्खेत सडकको स्तरोन्नतिमा ढिलाईलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सर्वप्रथम त तपाईको सैघाली खबर अनलाईनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । मेरा विचारहरु जनता माझ राख्ने मौका दिनुभएकोमा । मैले पहिले पनि भने यो चुनावमा बाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा छ । नेपाली कांग्रेस लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान अन्तर्गत संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको घटना लामो र संघर्षपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।